10 mere ị kwesịrị ị na Wụnye iOS 9 Beta
Ọ bụ ezie na nkà na ụzụ kwalite onwe ya oge na ọzọ ọ bụ ike kwere ihe bụ maka anyị ihe ọma na ihe na-adịghị eru ruo akara. Otu nsogbu na-edina ndị iOS 9 beta onye nkwa echela ruo ịbụ na eziokwu. Lee ndị mere ị na-ekwesịghị wụnye ọhụrụ a ngwa:
Ndakọrịta mbipụta na ngwa
E nwere ndakọrịta mbipụta na iOS 9 beta. Ị na-adịghị ike na-agba ọsọ ọbụna adụ wares dị ka Whatsapp fluidly si n'ebe. Ihe bụ nsogbu bụ na ha ka na-eche ịzụlite ha ngwa ọdịnala n'ihi iOS 9. The mbipụta ga-ofu na mmelite ga-kewapụrụ nanị mgbe Apple tọhapụrụ iOS 9 Golden ukwu. A ga-eme ndusụk ini ke September.
Ọ bụ kwa adọkpụ
Ndị a beta nsụgharị pụrụ nnọọ ịdị na-adọkpụ. Ọ nwere ike na-eme ka rata na ugboelu ma ọ bụ ọbụna na ngwaọrụ reboot. Nke a nwekwara ike ime eme na n'etiti unu na-ede ihe email ma ọ bụ nke dị n'etiti ihe dị mkpa oku.
Iwepụ si iOS 9
Ọ bụ omume dị ka na downgrade ka iOS 8.4 site 9 betas. Otú ọ dị, otu onye ga-amarakwa na ọ bụ ike iji weghachi ngwaọrụ gị site na iOS 9 azụ elu mgbe ọ downgraded ka iOS .3. Inwe njikere iji weghachi ngwaọrụ gị naanị ihe iOS 8 Ọ bụrụ na ị na-enwe ike ịchọta a dakọtara azụ elu. Otú ọ dị ihe ize ndụ na-anọgide na i nwere ike ida data n'etiti ụfọdụ i kwalite ka iOS 9 na oge ị downgraded. Ndị ọzọ na-ezighị ezi bụ eziokwu bụ na ị ga-enwe ike downgrade azụ ka gara aga version.
Ọ dịghị jailbreak kwere omume
Ọ bụrụ na ị nwere ngwaọrụ na-jaibroken, mgbe ahụ onye kwesịrị ịma na ị ga-bụghị naanị ida ndị dị mkpa jailbreak kamakwa ị ga na-ekpe na-unjailbreakable ngwaọrụ. Ọ ga-esiri hackers nyak jailbreak ngwaọrụ nke dịnụ beta nsụgharị nke iOS software mmelite gaghịkwa Apple-enwe ike idozi vulnerabilities ma ọ bụ obere ọpụpụ ji site jailbreak ngwaọrụ na dị ka version. Otú ahụ ka ofufe bụ ojiji jailbreak na ngwaọrụ gị nanị mgbe hackers enwewo ike t releases ya maka ọha version nke iOS 9. Pangu nọgidere na jailbreak maka iOS 8 na e wepụtara na njedebe nke October.
Kpam kpam kachasị
Ole na ole mbụ nsụgharị na-adị nke iOS 9 beta na-adịghị kachasị mgbe niile. Apple yikarịrị na-anakọta debug ọmụma ọbụna-enyere ya aka soro na ọbụna idozi chinchi. Ọ pụrụ nwekwara mmetụta na dị ọmụma na arụmọrụ. A ga-enwe oganihu na-aga na beta na-adọ.
Na beta na-adọ dịghị enyemaka si Apple ga-enwe ike iru gị. Ọ dịghị Mmepụta ga-inyere gị aka dị ka ọ bụ nanị beta frasi nke iOS 9. Otu ga-enwe nnọọ ka echere ruo mgbe ọzọ beta na-eweta na fixes ma ọ bụ ọbụna ikpeazụ ukara ntọhapụ.
Nke a beta ngwa anaghị ekwe nkwa ido na otu onye ga-ejikarị na-atụ anya nke Apple. The jụụ ọhụrụ atụmatụ na-dị otú ahụ gụnyere ihe dị ka slide n'elu gbawara n'etiti echiche multitasking ga-enwe ike o ọrụ na ụfọdụ ndị ọzọ ngwa. Developers nwekwara mkpa ka ịgbakwunye nkwado na enwekwukwa multitasking atụmatụ ha chọrọ ngwa.
Ọ bụ ka na beta na-adọ
Ee, ọ na-akpọ iOS 9 beta. Ọ pụtara na, ọ bụghị n'ihu ọha ntọhapụ na e si otú ịmachi ya ohere ndị mmadụ. Ọ ga-eji na kwaa adọ naanị mgbe ọ chọrọ ọnwa atọ idozi akụghịna mbipụta na chinchi. Developers nwekwara ike na-achọ oge maka emelite ha ngwa.
Ọ pụrụ imebi gị ngwa
Nke a akpan akpan beta software nwere ọchịchọ nke imebi gị niile ọzọ ngwa. N'ihi ya, Apple chọrọ software na-akpa-gaa mmepe. E nwere elu ekwe omume na onye gị na ngwa ga-amalite ime merụsịrị mgbe ị wụnye a software. Ọ pụrụ ma okuku ma ọ bụ gosi n'ozuzu akwusighi.
Nsogbu na ya elu gradation
Nke a akpan akpan software bụ na a ikpe mbipute na ekwentị mkpanaaka gị. Ọ bụrụ na ị na-ada nweta nkwalite ya site na njedebe nke ya finishing oge, ngwaọrụ gị ga-aghọ bricked. N'ihi ya, ọ nwere ike ime ka a mfịna gị ọrụ oge.
The beta version software mgbe arụnyere na site a Mmepụta na na ha bụ isi ngwaọrụ. Ha na-emekarị na-ngwaọrụ njikere maka anwale dị otú ahụ ngwa ọdịnala na beta nsụgharị nke iOS. N'ihi ya-abụ ihe amamihe ma zere nsogbu.
> Resource> iOS> 10 ihe mere i kwesịrị wụnye iOS 9 beta